Okuhamba phambili kwe-WD8117A / B Okunamandla Amabili Okungenakuhlanganiswa Okunamathelayo Okunamathelayo Komkhiqizi Wokupakisha Nezimo | Kangda
I-WD8117A / B Izingxenye Ezimbili Ezihlanganisiwe Zokunamathela Okunamathelayo Kokufaka Okuguqukayo
Le modeli ithuthukisa ukusebenza kwesendlalelo sangaphakathi, iletha ukungqubuzana okuphansi. Uma umshini wokwenza isikhwama unejubane elikhulu, le modeli izosiza.
Izici nobubanzi besicelo sezinto ezihlanganiswayo zokupakisha eziguqukayo
Okubizwa ngokuthi ukuhlanganiswa okuhlanganayo kokuguquguquka, ukusebenzisa izakhiwo ezingaphezu kwezimbili ezihlukene Okuhlanganisiwe okwenziwe ngezinto zokupakisha eziguquguqukayo, ukwakheka kunganikeza ukudlala okugcwele ekupakisheni okusha ngakunye kokusebenza okuphezulu ngezinzuzo zento ethile.
Ukupakisha okuguquguqukayo kweplastiki kubhekise ekupakisheni okuyinhlanganisela kwefilimu epulasitiki. Ingakwazi ukuhlanganisa izinzuzo zesendlalelo ngasinye sefilimu Ukuze unqobe ubunzima babo futhi uhlanganise ukuthola iphakethe elithandekayo kakhulu Ukulayisha izinto, kungahlangabezana nezidingo zemikhiqizo ehlukahlukene.
Isici esibaluleke kunazo zonke sezinto ezihlanganisiwe ukuthi izinto ezihlanganisiwe zinezici ezinhle kakhulu Ezakhiweni zezinto ezisetshenziswayo ezakha inhlanganisela. Izinto eziyinhlanganisela Yokupakisha, isesakhiweni esincane ukulandela ifindo Ngokubambisana, dlalani izinzuzo zokwakheka kwento, nweba ububanzi bokusetshenziswa, ekusebenzeni kahle kwezomnotho kukwenza kube iphakethe elisebenzayo neliphelele kakhulu lokupakisha izinto, ukusetshenziswa kokusebenza kwalo okuhle kakhulu, ukuze kuzuzwe Izidingo zephakheji yezimpahla ukulayisha.
Ukusebenza kokuhlanganiswa okuhlanganisiwe kuhle noma kubi futhi i-glue isetshenziswa lapho i-Adhesives eyinhlanganisela, ukukhetha kokunamathela kufanele kubheke ukunamathela kwayo, ukumelana okuphakathi, ukumelana nokushisa, inhlanzeko, njll. Ngakho-ke, izinto ezinhle zokupakisha ezihlanganisiwe azikwazi ukuhlukaniswa ukunamathela kwekhwalithi
Isetshenziswa ekuhlanganiseni ifilimu ephathwa njenge-OPP, i-CPP, i-PA, i-PET, i-PE, i-Al njll.
Lo mkhiqizo uxazulula kahle inkinga yokungqubuzana kwe-PE ne-CPP, yenza ungqimba lwangaphakathi lubushelelezi, okulungele umshini wokwenza isikhwama ngejubane elikhulu.
Isisindo sokumboza okuphansi
Sombulula kahle ukulingana kokungqubuzana kwe-PE ne-CPP
Isivinini se-lamination esiphakeme singafinyelela ku-450m / min
Ubuningi （g / cm3）
Olandelayo: I-WD8118A / B Izinto Ezimbili Ezinamathelisi Zokunamathisela Ezihlanganisiwe Zokupakisha Okuguqukayo
I-Solvent Free Adhesive For Polystyrene
I-Solvent Free Glue
I-Solvent Free Grab Adhesive
I-Solventless Laminating Adheisves Yokupakisha Okuguqukayo
WD8196 Uphiko olulodwa wokulaminetha Yesigcilikisha For ...